longtrainjourneys မော်ကွန်းတိုက် | တစ်ဦးကရထား Save
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ငြိမ်းချမ်းစွာနှင့်ပျော်စရာ. မိဘများအနေဖြင့်သူတို့၏အားလပ်ရက်ခရီးသွားခြင်းအကြောင်းကိုကလေးများနှင့်ပြောဆိုသည့်အခါသင်ကြားလေ့မရှိသောစကားလုံးနှစ်လုံး. ဒါကြောင့်, မီးရထားဖြင့်ဥရောပမှကလေးများနှင့်ခရီးသွားခြင်းအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်များကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်. ရထားတွေအကြောင်းကကလေးတွေကိုအေးဆေးငြိမ်သက်စေတယ်…